9 siyaabood oo aad u maamusho B2B Social Media-gaaga sida B2C Champ | BehMaster
Bogga ugu weyn/Warbaahinta bulshada/9 siyaabood oo aad u maamusho warbaahintaada bulshada ee B2B Sida Champ B2C
9 siyaabood oo aad u maamusho warbaahintaada bulshada ee B2B Sida Champ B2C
In kasta oo warbaahinta bulshadu ay tahay kanaalka suuq-geynta ee muhiimka ah ee ganacsi kasta, maamulka bulshada diiradda saaraya macaamiisha ayaa u muuqda, si fiican, madadaalo leh. Dhab ahaantii, ilaa aad tahay istaraatijiyad warbaahinta bulshada ee shirkadda B2B, waxaan sharad lahaa in inta badan noocyada aad raacdo on bulshada ma aha shirkadaha software aad (eek), ama shirkadaha maaliyadeed, ama maamulka xafiiska apps. Si kastaba ha ahaatee, istiraatijiyad bulsheed ahaan, waxaan raacaa noocyo badan oo summado ah oo aanan waligay wax ka iibsan si aan u helo dareemo bilicdooda, codkooda sumadda, iyo istaraatiijiyada ka-qaybgalka aasaasiga ah.
Noocyada B2C waa khabiiro ka dhigaya xisaabaadkooda bulsheed inay dareemaan dad badan. Taasi waa sababta aan u soo uruurinay liiska sagaal talo oo ay suuqgeynayaasha B2B ka baran karaan iyaga. Waxaa jira afar weji oo muhiim u ah casharradan:
Samaynta bilicda summadaada
Kobcinta xisaabtaada raacda
Kobcinta ka-qaybgalka warbaahinta bulshada
Ilaalinta taageerayaashaada iyo macaamiishaada
Astaamaha bilicda leh ayaa ah waxa ugu horreeya ee adiga ama kooxdaada suuqgeyneed aad u baahan tihiin inaad samaysataan ka hor intaadan quusin istaraatijiyad bulsho. Aynu run sheegno, summadaha u jeeda macaamiisha ayaa aad ugu wanaagsan adeegsiga kooxaha hal-abuurka leh si ay u dhistaan ​​bilicda summada midaysan. Taas macnaheedu waa wax kasta oo ka yimid midabada astaantaada ilaa cod iyo cod. Maya, uma maleynayo in shabakadaada Instagram-ka ama quudinta LinkedIn ay u baahan tahay inay si buuxda u eegaan, laakiin qoraal kastaa wuxuu u baahan yahay inuu ka turjumo astaantaada.
1. Qabyo tilmaanta codka sumadda
Iyadoo naqshadeynta iyo koobiga ay si siman muhiim ugu yihiin qoraalada warbaahinta bulshada, waxaan u maleynayaa inay fududahay in la waafajiyo qaabka nashqada calaamadeysan ee jirta marka loo eego dhanka kale. Haddi aanad weli u qorin hagaha guud ee codka guud ee mareegahaaga shirkada iyo agabka suuqgeynta, ka bilow halkaas. Go'aanso waxa noqon doona dhawaaqa rasmiga ah (tusaale, war-saxaafadeedyada, ogaysiisyada wararka, iimaylada kooxda fulinta) ilaa kuwa caadiga ah (tusaale, warbaahinta bulshada iyo iimaylada xayaysiinta).
Haddii ay dhibaato kaa haysato, ku billow aqoonsiga erayada aad adigu leedahay gabi ahaanba Marna ma rabto in lagu isticmaalo qoraallada bulshada. Taas ka dib, qeex erayada aad jeceshahay inaad isticmaasho si aad u sharaxdo wax bixintaada - laga bilaabo calaamadaynta ilaa cinwaannada ololaha suuq-geynta. Layligaasi waa inuu ka caawiyaa horumarinta qaar ka mid ah tilmaamaha maamulayaashaaga warbaahinta bulshada.
Oo intaad bilaabayso, fiiri hagayaasha dhawaaqa kale ee fikradaha. Waxaan halkan ku leenahay hal WordStream, hagaha MailChimp sidoo kale waa mid ka mid ah kuwa aan jeclahay.
2. Abuur shakhsiyad bulsho
Ma aha kanaal kasta oo bulsheed oo loo siman yahay. Markaa xitaa haddii LinkedIn iyo TikTok ay maamulaan isla suuqgeeyaha warbaahinta bulshada, waa inay xaqiiqdii ula dhaqmaan kuwa sida hay'ado kala duwan. Waxa aan u arkay sida ugu fudud in aan qaato hagaha codka warbaahinta bulshada oo aan u abuuro qof “iibsada” kanaal kasta.
Ha werwerin—kuwaasi aad ayay uga yar yihiin kuwa laga dhiso qofka iibsadaha caadiga ah, laakiin ku tiirsan suuqgeyneyaasha alaabtaada si ay halkan uga caawiyaan!
Kordhinta tirada taageerayaashaada
Markaad hesho bilic iyo jihayn cad nuxurkaaga warbaahinta bulshada, waxaad u baahan tahay inaad hubiso inaad dadka gaadhayso. Waa markii aad diiradda saari lahayd kobcinta dhagaystayaashaada iyo helitaanka taageerayaal badan.
3. Orod tartamayaasha iyo wax siinta
Inkasta oo tani ay u ekaan karto hab raqiis ah oo lagu helo taageerayaal cusub, bixinta bixinta bulshada waa la isku dayay oo run ah - oo laga xaday midigta buug-gacmeedka saamaynta warbaahinta bulshada. sidoo kale waa doorasho weyn oo loogu talagalay xisaabaadka B2B. Aan run sheegno, shirkaddee ayaan jeclayn inay laba bilood ku badbaadsato rukunka software-ka!?
Si kastaba ha ahaatee, haddii aadan heli karin kooxdaada inay saxiixdo bixinta alaabtaada bilaashka ah, ka fikir wax A.) guud ahaan caan ah ama B.) xoogaa la xiriira alaabtaada, sida wax-ku-kordhin ama bixinta lammaane .
4. La falgeli noocyada kale
Habka ugu wanaagsan ee lagu heli karo dad badan si ay u ogaadaan shirkaddaada iyo codkaaga waa inaad la falgalaan noocyada kale ee akoonadooda bulshada. Ka fakar: Halkii aad lacag ku bixin lahayd aragtiyaha ama aad ku dhegganaan lahayd dadka eeginaya qoraalladaada, u hor dhig dhagaystayaasha lammaanahaaga si bilaash ah. Haddii aad faallo ka bixinayso oo aad dib u dhejinayso nuxurkooda, waxay u badan tahay inay soo celiyaan raallinimada.
Tusaalaha aan jeclahay mar walba waa sida MoonPie ula falgalo noocyada kale ee Twitter. Haddii aad raadinayso tusaale ka duwan, ha ka fogaan xisaabaadka meme ee aad ugu jeceshahay Instagram-ama xitaa sida TikTok ugu ogolaato isticmaaleyaasha inay midba midka kale muuqaalkiisa “duet” ka helaan. Laakiin, waxaan ula jeedaa, sidee baad kartaa ma jeceshay is dhaafsigan?!
Kobcinta ka qaybgalka
Lahaanshaha tiro caafimaad leh oo raacsan waa wax weyn, tallaabada xigtana waa in la helo iyaga si ay ula falgalaan astaantaada. Taas macnaheedu waxa weeye in aad jeceshahay sawirada, ka faallooyinka qoraalada, iyo in ka badan. Halkan waxaa ah dhowr tibaaxood oo ka yimid sumadaha B2C kuwaas oo leh ka-qaybgal cajiib ah.
5. Feature aadanaha dhabta ah
Waan qiran doonaa, waxaan ahay balwad Aerie ah. Ma aha oo kaliya inaan jeclahay jiinisyada Eagle Eagle American, waxaan jeclahay dharka jimicsiga iyo dabaasha ee sumadda Aerie. Laakin waan gafsadaa. Waxa ugu fiican ee ku saabsan istiraatijiyaddooda bulsheed-iyo guud ahaan istaraatijiyadda sumadda-waa diidmadooda inay dib u taabtaan mid ka mid ah noocyadooda. Iyagoo ku dheggan xariiqda summaynta, waxay sidoo kale wadeen olole #AerieREAL ah, oo ay ku muujinayaan macaamiishooda oo xidhan alaabtooda.
Ku dhiiri geli macaamiishaada iyo kuwa raacsan inay alaabtaada ku soo bandhigaan ganacsigooda ama nolol maalmeedkooda. Iyadoo laga yaabo in aanay u xiiso badanayn sida leopard print leggings, muujinta siyaabaha badan ee ganacsigaagu uga caawiyo dadka kale inay shaqadooda qabsadaan ayaa si la mid ah ugu wanaagsan buugayga.
6. La qabso wakhtiga dhabta ah
Waxaa laga yaabaa inay dareemaan in qof walba iyo hooyadood ay si toos ah ugu socdaan warbaahinta bulshada inta lagu jiro maalmahan karantiil, laakiin taasi waxay sidoo kale calaamad u tahay in xitaa dad badan ay ku hawlan yihiin waqtiga dhabta ah. Iyadoo fiidyowyada tooska ahi ay horeba u helayeen hawlgelin 3x ka badan marka loo eego fiidiyowyada la duubay, waxaan sharad ku geli lahaa inaan arki doonno tiradaas oo koro marka Facebook uu sii daayo xisaabtiisii ​​ugu dambeysay.
Tixgeli inaad si toos ah ula wadaagto dhaqankaaga shirkadda, la wadaagto warshadaha/cusboonaysiinta shirkadda, ama aad ka jawaabto su'aalaha qaarkood. Tani waxay gelin doontaa shay kale oo aadanaha ganacsigaaga. Marka adiga (ama maareeyahaaga warbaahinta bulshada ama maamulahaaga ama qofkasta) aad awoodo inaad eegto kamarada oo aad si toos ah uga jawaabto su'aalaha macaamiishaada, taasi waa mid xoog badan.
Hagaag, haddii aad leedahay bilicsanaan sumad leh iyo kuwa raacsan oo hawlan waad dhammaysay, sax? Ma dhici karto! Waxaad u baahan tahay inaad la socoto baraha bulshada si aad u ilaaliso taageeryaashaada oo aad u sii gaadho macaamiishaada.
7. Ka jawaab faallooyinka
Way fududaan kartaa in aad ku shubto jadwalkaaga bulsheed bilowga usbuuca oo u ogolow jadwalkaagu iskiis u shaqeeyo. I rumayso, waan joogay. Si kastaba ha noqotee, siinta macaamiishaada jawaabo degdeg ah faallooyinkooda ama su'aalahooda so muhiim ah. Gaar ahaan marka aan dhammaanteen heleyno wax soo saar badan waqtiyo qosol leh oo maalinta ah, macmiilkaagu waxa laga yaabaa inuu u baahdo inuu ogaado jawaabtaas hadda, ka hor intaanay dib ugu dhicin hoos u dhac.
Tusaalaha ugu wanaagsan ee tan waa Spotify akoonkiisa Twitter-ka iyo-waxaad necebtahay inaad maqasho-TikTokers-ka caanka ah. Akoonada ugu caansan ayaa ka jawaaba faallooyinka, xitaa haddii ay tahay uun mid la mid ah. Maxaa ka sii wanaagsan, algorithms-yada madal bulsheed waxay abaalmariyaan nooca ka-qaybgalayaasha hal-abuurayaasha. Isticmaalaha TikTok wuxuu ku sii muujinayaa boggayga "Adiga" wuxuuna si joogto ah u korayay dhagaystayaashiisa. Waxaad ku arki kartaa TikTok halkan (ma sheegi kartaa inaan u baxsaday waalidkey si ay u karantiilaan?).
8. Muuji adeeg aad u wanaagsan
Faanka aan aadka u-hoosaysinayn ee bulshada lagu hayo waa waxa madal kasta loo sameeyay. Waxaan ula jeedaa, si dhab ah, qof kasta oo kale alaabtiisa guriga lagu dubay miyuu uga muuqdaa mid ka fiican tayda nolosha dhabta ah?! Waa maxay sababta rooti mooska ay u sawiran yihiin??
Haddi ay direyso daraasad xaaladeed (fadlan hel muqaal macmiilkaaga, fadlan hel muqaal macmiilkaaga), ama dib u twitter ku soo gelinaysa qaar ka mid ah ammaanta macmiilka, u bax oo ku dabci 'em. Xitaa si ka sii wanaagsan, ka samee sida adeeggaagu u fududeeyay noloshooda, wax soo saar badan, faa'iido badan, adigu magacaw.
Talo-siinta Pro: Noocyada B2C waxay caadi ahaan leeyihiin akoonnada twitter-ka oo u go'ay adeegga macaamiisha, sida @SpotifyCares. Haddii aadan rabin in quudintaada caadiga ah ay buuxiso codsiyada taageerada, ka fakar abuurista akoon taageero oo ay maamuli karaan kooxdaada adeegga macaamiisha.
9. Joogtaynta karti iyo olole joogto ah
Ugu dambayn, laakiin sida cad ugu yar, * waa inaad ka sii firfircoonaato akoonnadaada bulshada. Haddii aad dareemayso culayska shaqada ee ku socota, dooro hal akoon si uu u noqdo asaasigaaga, u samee nuxur taas, oo dib ugu celi kuwa kale. Anigu shakhsi ahaan waxaan kugula talinayaa inaad Instagram ka dhigto akoonkaaga aasaasiga ah sababtoo ah waxay u baahan tahay sawir-qaadis iyo nuqul, kaas oo si fudud dib loogu dhejin karo LinkedIn, Facebook, iyo Twitter (ama xitaa waxaad ku isticmaali kartaa Pinterest!).
Maskaxda ku hay, ilaalinta jadwalku ma wada aha. Waa inaad ugu yaraan saacad ku qaadanaysaa inaad ku dul-wareegto warbaahinta bulshada maalintii; hubinta faallooyinka, retweets, likes, follow, updates warshadaha, ka jawaabista qoraalada, iwm. Way u qalmi doontaa! Waqtigaas iyo tamartaas ayaa kaa caawin doona inaad maskaxda ku hayso fikrado cusub oo nuxur ah, kasbashada jilbaha, oo aad fahamto dhibcaha xanuunka isticmaalaha oo aad si waxtar leh u beegsato dhagaystayaashaada. Oo haddii aad isticmaalayso madal maamulka bulshada, habka oo dhan waa la fududayn doonaa adiga oo dejinaya digniinaha saxda ah.
Hubi inaad isticmaasho talooyinkan dhammaan aaladaha warbaahinta bulshada
Waxaan kaaga tagayaa talada ugu dambeysa: kaliya ha diiradda saarin LinkedIn. Waa aalad awood leh oo loogu talagalay iibinta iyo suuqgeynta B2B, laakiin haddii aad raadineyso inaad horumariso sumad, ku tiirsanow shabakado warbaahineed oo bulsho oo hal abuur leh! Ha ka baqin inaad muujiso midabadaada runta ah. Kala duwanaansiintu waxay u ballaarin doontaa aqoonsiga sumadda dhagaystayaasha cusub waxayna kaa caawin doontaa inaad sii haysato macaamiishaada.
Waa maxay 20 sano ee Google algorithm updates ayaa sheegaya waxa SEO-yada ay tahay inay diiradda saaraan xiga
14 Plugins CRM WordPress ah si ay ugu dallacaan meheraddaada 2021